Garowe: Tartan lagu soo gabagabeeyey 8 Nov 8, 2012 - 1:02:12 AM
Xarunta Laybareeriga magaalada Garowe ayaa maanta 08 November,2012 waxa lagu soo gabagabeeyey tartan ardeyda dugsiyada sare ka dhaxeeyey oo ku saabsanaa curinta Afka-Somaliga gaar ahaan gabayada iyo maansooyinka.
Hayada Somali Family Service ayaa soo qaban qaabisey,waxana ka qaybgalay dugsiga sare ee Al-Waaxa iyo Dugsiga sare ee Al-Nawaawi oo laga soo xuley 18 ardey kuwaasi oo 6 ka mid ahi u soo baxeen wareegii saddexaad.
Madaxa qaybta warbaahinta ee Laybareeriga Maxamed Daahir Yuusuf
ayaa ku sheegay barnaamijkaan mid sii socon doona islamarkaasina gabagabadiisa abaalmarino lagu gudoonsiiyey kuwii ugu heer sareeyey.
Ardayada tartanka ka qayb galaysay ayaa soo bandhigay gabayo ay curiyeen
gaar ahaan wiilasha ayaa soo jeediayay gabayadasi,halka gabdhuhuna ay soo diyaariyeen curisyo ku saabsan dhibaatada ay bacuhu ku hayaan deegaanka iyo caafimadka dadka.
Agaasimaha Laybareeriga Cabdirashiid Maxamed ayaa isna ka hadlay goobta lagu soo xirayay tartanka uu ardayda u qabtay ururku ,waxana uu dhalinta uu u sheegay in loo baahanyahay in tartamada dambe loo baahanayahy inay noqdaan kuwo lagu tartamo ka shaqeynta amniga iyo maamul wanaaga.
Barnaamijkaan ku saabsanaa kubcinta Afka-Somaaliga ayaa tartankiisa uu soo bilaabay laybareerigu 21 octoobar bishii la soo dhaafay taasoo ku beegnayad xiligii la qoray afka Somaaliga.
Halkan ka dhageyso Warbixinta Cawil Axmed ka diyaariyey munaasabada